Maxkamadda Gobolka Hargeysa Oo Xukuno Kala Duwan Ku Riday Mr. Guntar Oo Dhalashadiisu Tahay Jarmal Iyo Gabadh Reer Somaliland Ah | Araweelo News Network (Archive) -
Maxkamadda Gobolka Hargeysa Oo Xukuno Kala Duwan Ku Riday Mr. Guntar Oo Dhalashadiisu Tahay Jarmal Iyo Gabadh Reer Somaliland Ah
Mandheera(ANN)Maxkamadda Gobolka Hargeysa ayaa maanta ku dhawaaqday go’aanka dacwad xaasaasi ah oo ka dhan ah Mr. Guntar Bischoss, oo u dhashay dalka Jarmalka , kaas oo ku eedaysanaa inuu falal dhaqan xumo ah ku sameeyay gabdho Reer Somaliland ah, waxaana lagu riday xukumo
kala duwan oo isugu jira Ciqaab,Ganaax lacageed iyo masaafurin. Sidoo kale waxa iyana xukun ciqaab iyo ganaax lacageed ah maxkamaddu ku riday Haweenay u dhalatay Somaliland oo la wadaagtay eedaha loo haysto Mr. Guntar. Sidaana waxa shebekadda wararka ee Araweelonews u xaqiijiyay Qareen Bashiir Xuseen Cabdi oo ka mid ah labada qareen ee ay Xukuumadda Somaliland u qabatay inay difaacaan Mr. Guntar.
Garsooraha Maxkamadda C/rashiir Duraan ayaa kaga dhawaaqay xukunada kala duwan ee labadaa Eedaysane Hoolka dhismaha Dugsiga Tababarka ee Mandheera oo qiyaastii 80km kaga beegan dhinaca Barriga Magaaladda Hargeysa, waxaana Maxkamaddu ku xukuntay Eedaysanaha koowaad Mr. Guntar Bischoss 4 sannadood oo xabsi ah, $ 10,000 (toban kun oo dollar) oo ganaax ah iyo in laga masaafuriyo dalka Somaliland marka uu dhamaysto xukunkaa oo aanu weligii dib ugu soo laaban Karin Somaliland.
Sidoo kale Eedaysanaha labaad oo ah haweenayda u dhalatay Somaliland ee la wadaagtay dacwada ayaa Maxkamaddu ku xukuntay xukun ciqaab oo ah hal sanno oo xadhig ah iyo 5mly oo lacagta Somaliland oo ganaax ah.
Labada eedaysane iyo Qareenada difaacayay ayaa maxkamadda ku sugnaa markii uu garsoore C/rashiir Duraan ku dhwaaqay xukunka. Iyadoo ay maxkamadda goob joog ka ahaayeen suxufiyiin ka socday warbaahinta Somaliland iyo dadweyne kiiska la socday oo dhegeysanayay.
Qareen Bashiir oo ka mid ah labada qareen ee difaacayay labada Eedaysane ayaa shebekadda wararka ee Araweelonews weydiisay sida uu u arko go’aanka maxkamadda iyo inay anbiil ka qaadanayaan, wuxuuna yidhi, “waan ka fiirsanayaa dhinacayga inaan anbiil ka qaadano kiiskaa.”
Markii ay dad baddan oo ka mid ah Bulshada oo ninkaa aqoon u lahaa, ama maqlay ku war heleen in xabsiga loo taxaabay iyo falalka lagu eedeeyay, waxay taasi ku noqotay sheeko ka yaabisay, iyadoo dacwadda kiiska oo la doonayay in lagu dhegeysto maxkamadda Degamadda ee Hargeysa laga wareejiyay daba yaaqadii bishii hore. Kadib markii muran dhinaca sharciga ahi ka dhashay awooda iyo derejada maxkamadda kiiskaa qaaday, balse markii danbe loo wareejiyay Maxkamadda gobolka hargeysa, laakiin kiiskaa oo noqday mid xaasaasi ah, isla markaana abuuray saxmad iyo jawi cabsi geliyay dhinaca garsoorka. Kadib markii boqolaal qof oo doonayay inay wax ka ogaadaan kiiskaa kusoo xoomeen maxkmadda ayaa loo wareejiyay dhinaca degmadda mandheera oo ka tirsan gobolka Saaxil oo laba fadhi lagu dhegeystay kiiska, iyadoo ay Maxkamaddu maanta ku dhawaaqday go’aankeeda ay ku saartay xukunada kala duwan ee ciqaabta ah iyo ganaaxa lacagta ee ay ku riday labada eedaysane.